Galaxy Mini GT- S5570 (2.3.4)ကို root လုပ်နည်း – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For Pc Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MB Smarth Stay EX(Do Not Buy)-v.1.0.4 For Android(642Kb) FL Studio Mobile V1.0.5 Apk+OBB-(123Mb) Coin Dozer v 5.9(latest version)for android Home
Published On: Thu, Oct 18th, 2012 Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ | By အိမ့်ကျော့ မှုး Galaxy Mini GT- S5570 (2.3.4)ကို root လုပ်နည်း
Tags ShareFor 2.2.1 version Galaxy Mini က များသားအားဖြင့် 2.2.1 နဲ့ သာ လာတာများပါတယ်။ Version မမြှင့်ရသေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ။ နဂို 2.2.1 ပဲ ဖြစ်ဖြစ် root လုပ်နည်းက အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။
Galaxy Mini GT- S5570(2.2.1) Root လုပ်ဖို့ အတွက် ဒီ နေရာမှာ ကြည့်ပါ။
For 2.3.3/2.3.4 version 2.3.3/2.3.4 version တွေအတွက် ဆိုရင်တော့ super one click နဲ့ လုပ်လို့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Driver မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက် Driver ကို ဒီမှာ ရယူပါ Samsung USB Driver အားရယူရန်
Galaxy Mini GT- S5570(2.2.1) Root လုပ်ဖို့ အတွက်
(၁) GTS5570 2.3.4 update 1.zip ကိုဒီမှာ ယူပါ။
(၂) ဒေါင်းလုပ် ရယူထားတဲ့ GTS5570 2.3.4 update 1.zip ကို ဖိုင်မဖြည်ဘဲ sd card ထဲကို ထည့်ပါ။ (မည်သည့် Folder အောက်တွင်မှ မထည့်ပါနဲ့)
(၃) ဖုန်းကိုစက်ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် recovery mode ကို HOME+POWER ကို တွဲနှိပ်ပြီး ၀င်ပါ။
(၄) recovery ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် အသံအတိုးအချဲ့ ခလုတ်လေးတွေနဲ့ အပေါ်အောက်ရွှေ့ပြီး Apply update from SD card ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။
(၅) flash လုပ်ပြီးသွားတဲ့အထိ ခဏစောင့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကိုReboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
မိမိဖုန်းမှာ super user ပုံလေးနဲ့ root ရနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Be Happy EKH
အိမ့်ကျော့ မှုး - Related News
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 [N5100] v4.1.2 ကို Root မယ်
6 comments on “Galaxy Mini GT- S5570 (2.3.4)ကို root လုပ်နည်း”	Sai ko on November 9, 2012 at 5:46 pm said:
ကျေးဇူးပါ ဗျာ ကျနော့ဖုန်းလေး root ပြီးသွားပြီဗျ.
Reply ↓	အောင်ရဲပိုင် on November 13, 2012 at 6:59 am said:
ကျွန်တော့်ဖုန်က Galaxy Mini GT- S5570 (2.3.6)ဗျအဲဒါကောအဆင်ပြေမလားမသိဘူး
Reply ↓	ဖြိုးလေး on November 15, 2012 at 9:28 pm said:
Reply ↓	mgmg on January 28, 2013 at 6:35 pm said:
ကျနော်ဖုန်း samsung galaxy mini S5570 ကို ROM Manager တင်ပြီး flash clockworknod Recover ကိုနှိပ်လိုက်မိတယ် အဲထဲက HUAWEI CWM ကိုနှိပ်လိုက်မိတာ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တော့ ဘာမှပြန်တက်မလာတော့ဘူး ROM ပြန်တင်မလို့ CWM ခေါ်တာခေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေလိုက S5570 CWM ဘယ်လိုပြန်သွင်းရမလဲ သိချင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် အော်ရယ်ဂျင်နယ်ROM ကိုဘယ်လိုပြန်သွင်းလို့ ရမလဲသိချင်ပါတယ် ကူညီကြပါအုံးခင်ဗျာ…..
Reply ↓	ကိုထွေး on April 7, 2013 at 12:41 pm said:
အကို ကျွန်တော် ဖုန်း က apply up date from sd card ကို ရွှေး ပြီး သွား ရင် ဘာလို့ flash ဖြစ်မသွား ၇တာလဲ ခင်ဗျာ root လုပ်ထားတာ နဲ့ မလုပ်ထား တာ ကို ဘာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကိုကျေး ဇူး ပြုပြီးပြန်လည် ဖြေပေးပါ ခင်ဗျာ
Reply ↓	ကိုထွေး on April 7, 2013 at 12:44 pm said:
်fail ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေပါတယ် ခင်ဗျာ
mg kyaw on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting)Hein Maung on Y210 B829 root toolngelay on Y210 B829 root toolngelay on Y210 B829 root toolhtetmtic on Furby v1.0.8 for iPhone/Pad/Pod touch Android Development